I-China yabantwana iRaincoat eneHood USD1.1-USD2.3 yoMvelisi kunye noMthengisi | Ngonaphakade
Igama lemveliso: Idyasi yemvula engenamanzi
Umsebenzi wangaphandle: Inkampu, ukuhamba intaba
Ibhulukhwe / ibhulukhwe engqina imvula / iKapa elinethayo IMVULA
Iqela lobudala: Abantwana
Igama lebrand: FB
Inombolo yomzekelo: FB2028
Umbala: Mfusa, Pinki, Luhlaza, Bomvu okanye ngentando yakho
Ubukhulu: 0.12mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm
Ubunzima: Malunga ne-180g-220g
Ubunzima ngeYunithi: Imilinganiselo. 180g-220g
Ubungakanani beCarton: 37 * 26 * 25cm
Iyunithi nganye ngeCarton: 50pieces
Ubunzima beCarton: Malunga ne-12kg
Ii-odolo ezincinci zamkele amaxabiso
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kweNkonzo
Ukuvunywa komgangatho weSampula efumanekayo
Ukupakisha ukusebenza kweMveliso
Udumo Rhoqo olwenziwe
Egqithileyo Banokulahlwa PE olungxamisekileyo imvula poncho USD0.12-USD0.3
Okulandelayo: I-poncho yemvula entle yangaphandle yabantwana ye-USD1.1-USD1.8
Q: Ngaba uyayamkela i-OEM ne-ODM?
A: Ewe, samkela i-OEM ne-ODM
Q: Yeyiphi indlela yokuhlawula?
A: Samkela i-TT, i-Paypal, i-L / C engenakuguqulwa kwimbono, i-Western Union
Q: Ngaba ndingafumana iisampulu zokujonga umgangatho?
A: Ewe, siyavuya ukukunika iisampulu kwaye sinikezela ngenkonzo yesampulu ngokweemfuno zakho. Isampulu inokuba simahla okanye ihlawuliswe ngokuxhomekeke kwiimeko ezithile. Abathengi kufuneka bahlawule imirhumo yeempahla kwiisampulu.
Q: Yintoni na jikelele ukulayisha port yakho?
Q: Ngubani ixesha phambili?
A: Ixesha lokukhokela liyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lweemveliso kunye nobungakanani beodolo.
Q: Ulawula njani ulawulo lomgangatho?
A: Umgangatho usoloko uphambili kuthi. Sinika ingqalelo enkulu kulawulo lomgangatho ukusuka kwasekuqaleni ukuya esiphelweni. Sinamaxwebhu aneenkcukacha zeQC ngayo yonke into kwaye iqela lethu leQC lenza uhlolo olucokisekileyo lwempahla nganye.
Q: Inkonzo yokuThumela
A: Singacwangcisa ulwandle / umoya / ukuhanjiswa kwekhuriya kunye nokudityaniswa nabanye abathengisi bakho.
Abantwana PVC iidyasi zemvula
I-Pvc Imvula Coat yaBasetyhini
Isuti yePvc yeMvula
Elungiselelweyo ezimibalabala ethambileyo 100% Polyur manzi ...
Abantwana Pu Imvula, I-Peva Raincoat, I-Pvc Imvula enqabileyo, IPvc Poncho, Pu Imvula, Abasetyhini beMvula,